अन्य संसारमा: थाहा दिनुहुन्न?
Otherworld सधैं व्यक्ति रुचि थियो। आज, जान्न इच्छा त्यहाँ मृत्यु पछि जीवन छ कि छैन भनेर, धेरै overcomes। यो कार्यक्रम र सुविधा फिलिमहरु सयौं हटाइयो। आधुनिक समाजमा विरलै दन्तिये र स्वर्ग र नरक बारेमा कथाहरू विश्वास। एक व्यक्ति उहाँले सुन्नुहुन्छ भन्ने सबै प्रमाण र पुष्टि आवश्यक छ।
यस अगाडी हिड के हो?
सुरुमा, यो प्रवेश जो ठाँउ प्रेम र सद्भाव को पूर्ण, मा बुझे थियो मृत्यु पछि प्राण। अरूलाई यो भावना बोकेको प्रेममा जन्म र उठाएको एक व्यक्ति, उसलाई मर्न गर्नुपर्छ। यस मामला मा, मृत्यु शोक र आनन्द र प्रियजनहरूलाई संग बैठक को प्रतीक्षा ल्याउन छैन। यो स्थान प्रत्येक आफ्नै हुन, र सबैलाई मा आनन्द को तस्वीर पछि गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य संसारमा, सबै जीवित कुराहरू जस्तै, परमेश्वरले सिर्जना गरियो। त्यहाँ एक व्यक्तिले आफ्नो पार्थिव जीवन अन्त पछि हुनैपर्छ। यस संसारमा आनन्द ल्याउन र भित्री प्रदर्शन गर्नुपर्छ मानिसको सार।
को afterlife को वास्तविकता के हो?
मानव प्राण लागि, र यदि त्यहाँ, त्यसपछि लामो समय को लागि थिएनन् एक आदर्श ठाउँ। यो कुरा पृथ्वीको दया र प्रेम, झन् दुष्ट, स्वार्थ र विश्वासघात सामना गर्दै छ। पनि शुद्ध प्राण लगातार परीक्षण गर्न subjected छ, र कहिलेकाहीं बाहिर संसारमा सामना गर्न सक्षम छन्। नकारात्मक भावना विचार को प्राण बस्ने ती मृत्यु पछि गायब छैन। तिनीहरूले संक्रमित र यो विनाश अर्को संसारमा ओसारपसार छन्। यो स्थान मानव प्राण को एक प्रतिबिम्ब हो भन्ने तथ्यलाई दिइएको, यो के यो मामला मा हुनेछ मान गर्न सजिलो छ।
अन्य दुनिया संचार
आधुनिक मानिस आफ्नै मा सहित र otherworldly, हामीलाई वरिपरिको विश्व बुझ्छु। यो केवल भूत, आत्माको र भूत को वासस्थानमा संग सम्बन्धित छ। धेरै मानिसहरू अज्ञात को पर्दा पछाडि हेर्न र तिनीहरूलाई त्यहाँ पर्खिरहेको के पत्ता लगाउन गर्छन। यो तिनीहरूले जादू गर्न Resort, वा विशेषज्ञहरु को मद्दत। पैतृक प्राण संग संचार को सत्र लागि सबैभन्दा लोकप्रिय आइटम मोमबत्ती र दर्पण हो। तिनीहरूले लामो अन्य संसारमा कंडक्टर छलफल गरिएको छ। पनि आजको समाजमा यो कसैले मृत्यु हुँदा घरमा ऐना झुन्डियो चलनअनुसारको छ।
तर, अन्य दुनिया संचार यो रोचक छ रूपमा खतरनाक छ। यो, गर्नुपर्छ मात्र पूर्व-तयार यसलाई एक अनुभवी व्यक्ति मिलेर मनमोहक छ। अन्यथा, otherworldly सेना मानव स्वास्थ्य र जीवन हानि गर्न सक्छ।
केही कारणले धेरै आत्माको हाम्रो संसार नछोड। तिनीहरूले जीवनमा संलग्न थिए जो गर्न ठाउँमा बाँकी छन्। लामो समय को लागि उनलाई धेरै तिनीहरू मरे गरेको महसुस गर्न सक्दैन। यसलाई आराम गर्न सबैभन्दा गाह्रो कि विश्वास छ मान्छे को प्राण हिंसात्मक मृत्यु मृत्यु भएका। तिनीहरूले अधूरा व्यापार रहने र बर्बाद जीवनको लागि रिसले र रिस एक बढ्दै अर्थमा।
प्रेम र सद्भाव अनन्त जीवन
माथि उल्लेख रूपमा, अन्य संसार आध्यात्मिक "म" व्यक्ति झल्काउँछ। प्रत्येक आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई प्रशिक्षित भन्ने तथ्यलाई गर्न ल्याउँछ। Overflowing प्रेम प्राण आनन्द भरिएको एउटा सुन्दर र सुरिलो संसारमा शान्ति पाउनुहुनेछ। घृणा र स्वार्थ राम्रो मानिस केहि ल्याउन छैन, र उहाँको मृत्यु। यस्तो प्राण भाग्य अनन्त Wandering, डर र आशाहीनता छन्।
सुल्तान: मान, मूल, भाग्य को नाम
गाउँमा जादू: फाइदा र बेफाइदा
Gordey (नाम): अर्थ र मूल
एकै नजरमा त्रिकोण पैसा: विवरण र विशेषताहरु। Palmistry: त्रिभुज पैसा
"बेला" Lermontov: सारांश। "हाम्रो समय हिरो", को अध्याय "बेला" को एक सारांश
को छत बोर्ड: आकार, प्रकार, रंग
Openwork ढाँचा crochet कसरी बुनना गर्न: योजना, फोटो, सुझाव
Aspergillus नाइजर - यो के हो? आकृति, उपचार